Maxay tahay sababta kaarkeyga loo diiday? – Transfer Galaxy
Lacag ku bixinta kaarka
Maxay tahay sababta kaarkeyga loo diiday?
Kaarkaaga waxaa laga yaabaa in loo diiday qaar sababo daraadeed, waxaa laga yaabaa in laga diiday bankigaaga ama Transfer Galaxy sababtuna tahay:
- Faahfaahin khaldan: Fadlan hubi mar labaad in faahfaahinta kaarkaaga si sax ah aad u galisay.
- Barida amniga ee bangiga: bangigaaga ayaa laga yaabaa inuu diiday sababo amniga ah daraadeed, gaar ahaan haddii ay ahayd lacag bixin aan la filayn. Fadlan la xiriir bangigaaga si aad u ogeysiiso inaad isku dayayso inaad lacag ka dirto Transfer Galaxy.
- Kaararka aan la taageerin: Transfer Galaxy ma oggolaado kaararka ah horey-u-bixin (prepaid) ama kaararka shirkadaha loogu talagalay koontooyinka shakhsi ahaaneed.
- Kaarka waxaa iska leh qof kale: Fadlan hubso inaad isticmaashid kaar adiga kuu gaar ah. Magaca kaarka ku qoran wuxuu u baahan yahay inuu la mid noqdo magaca koontadaada /xisaabtaada ee Transfer Galaxy.
- Kaarka waxaa loo isticmaalay koonta kale ee Transfer Galaxy: adigoo awood kaliya u leh inaad lahaato hal koonto qofkiiba, isla kaarka looma isticmaali karo koontooyin badan.
2 din 8 au considerat acest conținut util